မြန်မာဇာတ်ကား - ကမ္ဘာဦးမှတ်ပုံတင် - မြင့်မြတ် ၊ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း - Myanmar Movies - Love Drama Romance - CSGO game videos - GameForx.com
မြန်မာဇာတ်ကား – ကမ္ဘာဦးမှတ်ပုံတင် – မြင့်မြတ် ၊ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း – Myanmar Movies – Love Drama Romance
by Mahar · 20th October 2020
ျမန္မာဇာတ္ကား – ကမာၻဦးမွတ္ပုံတင္ – ျမင့္ျမတ္ ၊ သၪၨာႏြယ္ဝင္း – Myanmar Motion pictures – Love – Drama – Romance
မြန်မာဗီဒီယို မြန်မာဇာတ်ကားများကို ရုပ်သံကြည်လင် HD High quality ဖြင့်
မြန်မာဇာတ်ကားများကို ရုပ်သံကြည်လင် HD High quality ဖြင့်
Myanmar Motion pictures with HD High quality
Presenting each day.
Please subscribe to Mahar to maintain updated.
* Cell app ဒေါင်းရန်
မဟာ အပလီကေးရှင်းကို ဖုန်းမှာ set up လုပ်ပြီး
* Mahar social community
Mahar is the distributor of DVD, on-line & offline channel, approved IP agent of Film manufacturing, Mahar TV Channel for TV audiences, Mahar App for cellular audiences, Mahar YouTube on-line Media for on-line audiences and Mahar & Mahar cellular Fb Social Media for social community.
ABC Content material Options သည်ဒီဗီဒီ၊ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းချန်နယ်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏တရားဝင်အိုင်ဒီကိုယ်စားလှယ်၊ တီဗီပရိသတ်များအတွက် Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar အက်ပလီကေးရှင်း၊ အွန်လိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar YouTube On-line Media နှင့် Mahar & Mahar မိုဘိုင်း Fb လူမှုမီဒီယာ လူမှုကွန်ယက်။
ABC Content material Options သည္ဒီဗီဒီ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ေအာ့ဖ္လိုင္းခ်န္နယ္၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး၏တရားဝင္အိုင္ဒီကိုယ္စားလွယ္၊ တီဗီပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar အက္ပလီေကးရွင္း၊ အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar YouTube On-line Media ႏွင့္ Mahar & Mahar မိုဘိုင္း Fb လူမႈမီဒီယာ လူမႈကြန္ယက္။
We invested loads in film contents and launched greatest film library is accessible solely in Mahar. Mahar targets to various person teams. From our expertise on YouTube channel, Myanmar has an enormous film fan domestically. Mahar had earlier launched an App in Play Retailer for over4years. And launchedabrand new model lately for Myanmar market. We anticipated to keep up 5,000 over film library for our customers.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ရှင်များစွာအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး အကြီးမားဆုံး မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဘဏ်တိုက်ကိုမဟာ တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။ Mahar သည် မတူညီသော ရုပ်ရှင် နှစ်သက်သူ အုပ်စုများကို တင်ဆက် ပြသနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ ယူကျု့ချန်နယ်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအတွေ့အကြုံများအရမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေသတွင်းရုပ်ရှင်ပရိသတ်များစွာရရှိထားသည်။ Mahar သည် Play Retailer တွင် အပလီကေးရှင်းကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ ၄ နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်အတွက် ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုသူများအတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mahar additionally cooperates with native cellular operators resembling MPT, telenor, Ooredoo, MyTel, in addition to different web companies resembling Ananda and Myanmar Internet.
မဟာသည် ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများဖြစ်သည့် MPT, telenor, Ooredoo, MyTel အစရှိသည်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် အခြား အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Ananda, Myanmar Internet တို့နှင့်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မဟာသည္ ျပည္တြင္းမိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္သည့္ MPT, telenor, Ooredoo, MyTel အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အျပင္ အျခား အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Ananda, Myanmar Internet တို႔ႏွင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။
We’re additionally partnering with banks resembling ABC Pay, AYA Pay.
You can even watch the flicks of many actors, resembling Nay Toe, Myint Myat, Pyay T Oo, Lu Min, Kyaw Ye Aung, Nay Min, Ye Tike, Nay Dway, Kyaw Thu, Yan Aung, Ye Aung, Kaung Pyae, Kaung Khant, Nay Htoo Naing, Nay Htet Linn, June Ko and in addition watch Eain Dra Kyaw Zin, Thet Mon Myint, Khine Skinny Kyi, Wut Moan Shwe Yee, Phway Phway, Shwe Moan Yati, Shwe Ta Mee, Yadanar Bo, Chuu Lay.
Motion, Drama, Love, Youth movies are being offered.
Myanmar Video – Ka Bar Oo Mhat Pone Tin – Myint Myat , Thinzar Nwal Win – Love – Drama – Romance
® This film is all rights reserved by abc content material options & its associated channels.
Tags: ''burmese''dvb''''editorial''''ဂီတ''20192020ActionASIAburmese moviecelebritycomedydramaEntertainmentferrFreefunnyhorrormahar moviemahar trailermahar videomoviemovie 2020movie trailermoviesmyanmarmyanmar moviemyanmar movie trailermyanmar videomyint myatnewNew movienewsradioReportrfaRomanceYangonဇာတ်ကားဇာတ်လမ်းဗီဒီယိုမဟာ ဗီဒီယိုမဟာ ရုပ္ရွင္မြင့်မြတ်မြန်မာမြန်မာဗီဒီယိုရယ်စရာရုပ်ရှင်သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းဟာသ
Movie Explained in Hindi | Assimilate (2019) | Sci-fi Horror Movie हिन्दी | Miss Storyteller
Next story Distillery Botanica – Garden Spritz
Previous story Study: Americans May Begin Stockpiling Again Due To COVID-19 Fears, Election Uncertainty